घर » पर्यटन समाचार » पर्यटकहरू हवाई COVID-19 तथ्या .्कको राज्यमा गणना गरिएको छैन
हवालाई COVID-19 लाई बाहिर राख्नको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वको मोडेलको रूपमा हेरिएको छ। यो आशा गर्न सकिन्छ कि यो धारणा तथ्यमा पनि आधारित छ। राज्य अधिकारीहरू र निर्वाचित अधिकारीहरूले अपूर्ण COVID तथ्या with्कहरूको साथ आगन्तुकहरू र बासिन्दाहरूलाई भ्रमित गर्न जोखिम किन लिन्छन्?
सिनेट र सभा दुबैबाट हवाई विधायकहरू र स्वास्थ्य र प्रकोपको सामना गर्ने समितिका सदस्यहरूको पुष्टि भयो: COVID विकास गर्ने पर्यटकहरूलाई पहिले गणना गरिन्छ तर पछि हटाइन्छ।
के हवाई गभर्नर इगे र होनोलुलु मेयर ब्लान्गार्डीले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट जोगिन चाहेका थिए ताकि यसलाई सार्वजनिक प्रेस सम्मेलनमा सोध्न सकिएन?
COVID-१ p महामारीको समयमा हवाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा प्रतिबन्धित स्थानको रूपमा देखिएको छ। हवाई यात्रा कत्तिको सुरक्षित छ?
eTurboNews र हवाई न्यूज अनलाइनलाई हवाई राज्य र होनोलुलु शहरमा प्रेस सम्मेलनहरूमा प्रश्नहरू सोध्न मिडियाबाट बहिष्कृत गरिएको छ। त्यहाँ एक कारण हुन सक्छ। धेरै महिना को लागी, eTurboNews COVID-१ published नम्बरहरू प्रकाशित भएको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने अवसरको लागि प्रतिक्षा गर्दै थिए।
COVID-१ p महामारीको समयमा हवाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा प्रतिबन्धित स्थानको रूपमा देखिएको छ।
हवाईको यात्रा र पर्यटन पहिले नै रेकर्ड संख्यामा फिर्ता छ जब यो आवासीय आगमनको कुरा आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बन्द छ। सामुदायिक टाउन हल बैठकमा, हवाई पर्यटन प्राधिकरणका सीईओ जोन डि फ्राइजले पर्यटनको संख्यालाई and to% सीमित गर्ने कुरा गरे भने वातावरण र हवाई संस्कृतिलाई बचाउन जब पर्यटन विश्वको बाँकी ठाउँ सly्ख्यामा संख्या वृद्धि गर्न खोज्दै छ।
हवाईमा अझै पनि १०-दिनको क्वारेन्टाइन रहेको छ सबैमा प्रवेश गर्नेको लागि Aloha एक अनुमोदित अमेरिकी प्रयोगशालाबाट एक निर्दिष्ट COVID-19 परीक्षण बिना राज्य। स्पीड परीक्षण स्वीकार्य छैन। यो संगरोध आवश्यकता एक स्वीकृत सुविधा द्वारा एक नकारात्मक परीक्षणको साथ माफ गरिएको छ।
हवाई राज्यले COVID-१ cases घटनाहरूको वास्तविक संख्या लुकाउनका लागि आफ्ना मानिसहरूलाई र पर्यटन उद्योगलाई किन भ्रमित गर्दछ? एक नर्स जसले अज्ञात रहन चाहन्थे बताइयो eTurboNews उनको जरुरी देखभाल कार्यालयले सबै समय सकारात्मक COVID-19 परीक्षणहरूको साथ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्दछ।
eTurboNews हवाई विभागको स्वास्थ्य विभाग, हवाई लजिंग एण्ड टुरिज्म एसोसिएसन, र स्वास्थ्य सम्बन्धी सिनेट र सदन समितिका सदस्यहरू र महामारी र डिस्स्टर तयारी सम्बन्धी हाउस कमेटीमा रहेका विधायकोंसम्म पुग्यो।
हवाईको सुरक्षित पर्यटन कत्तिको सुरक्षित छ र यसमा सुरक्षित बासिन्दाहरूले वास्तवमै पर्यटकहरूसँग कसरी कुराकानी गरिरहेका छन् भन्नेमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि अज्ञानतालाई मात्र लापरवाहको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ।
सिनेटर शेरोन मोरिवाकी केहि थप अनुसन्धान गरे र अन्तिम निर्णय संग बाहिर आए।
पर्यटकहरू हवाईमा ती मिनेटमा गणना गरिन्छ जुन उनीहरूलाई COVID-१ positive सकारात्मकको रूपमा निदान गरिएको छ। एक चोटि यो छानबिन भएपछि यस आगन्तुकको अर्को राज्यमा ड्राइभर इजाजतपत्र पाएपछि ऊ वा उनी हवाई काउन्टीबाट हटाइनेछ र उसको घर वा राज्यमा गणनामा थपिने छ।
अर्को शब्दमा, त्यहाँ हवाईमा COVID-१ count गणनामा निरन्तर थप्न र घटाउने देखिन्छ, आगन्तुकहरू र त्यहाँका बासिन्दाहरूबाट सहि संख्याहरू लुकाउँदै। यस तरिकाले, सुरक्षा र सुरक्षाको भावना भ्रमको आधारमा सिर्जना गरिएको हो।
COVID-19 लाई नियन्त्रणमा राख्न संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वका लागि हवाईलाई एक नमूनाको रूपमा हेरिएको छ। यो आशा गर्न सकिन्छ कि यो धारणा तथ्यमा पनि आधारित छ। तथ्य रहिरहन्छ कि हवाई बासिन्दाहरूको लागि COVID-19 संक्रमणहरू कम छन् र वृद्धि भइरहेको छैन। तथ्य यो पनि हो कि हवाईका अधिकांश बासिन्दाहरूलाई खोप लगाईएको छ वा खोप दिने प्रक्रियामा छ। त्यसोभए किन अधिकारीहरूले COVID तथ्या with्कहरूको साथ आगन्तुकहरू र बासिन्दाहरूलाई भ्रमित गर्ने जोखिम लिने छन्?
फोन कलहरू सुन्नुहोस्। अन्तिम कलले यो सबै प्रकट गर्दछ: